DAAHFURKA MALABKII UK AYAA NOQDAY RIKOODHKA 2016 - UKRAINE
Ugu Weyn Ee Ukraine
Daahfurka malabkii Uk ayaa noqday rikoodhka 2016
Sida laga soo xigtay adeegga wargeyska ASTP, dhoofintiisa sannadkii hore ee malabkii Uk ayaa noqotay rikoodh. 56,9 kun oo oo ah malab ayaa la dhoofiyay, taas oo 21,000 ton oo ka badan sannadkii hore iyo 5.8 jeer ka badan intii lagu jiray 2011. Malabka ugu weyn Ukraaniyaanka waxaa iibsaday dalalka Yurub. Gaar ahaan sannadkii hore Jarmalka ayaa soo saartay alaabtayada $ 32,600,000 (33% oo ah dhoofinta malabka oo ka timid Ukraine), Poland - 18.1 milyan oo doolar (18.6%) iyo Maraykanka - $ 17.7 milyan (18.1%).
Ganacsiga aduunka ee malabku sanad walba ayaa sii kordhaya, taasina waxa caddaynaysa kororka adduunka oo soo hagaagay 32% 5 sano, taas oo 2015-ka ay ahayd 23 bilyan oo doolar. Asal ahaan, badeecooyinka waxaa soo iibsaday Midowga Yurub, kaas oo sannadka 2015 kaliya laga keeno malab dhan 11 bilyan oo doolar (47%). Maraykanku wuxuu noqday macaamiil weyn oo ballaaran, isagoo iibsaday 26% wax soo saarka dibedda ah. Sababtoo ah kororka dalabka caalamiga ah, dhoofinta malab Ukraan ah ayaa sidoo kale sii kordhaya. Tusaale ahaan, sannadka 2015, tirooyinka waxsoosaarka ayaa hoos u dhacay 63.6 kun tan (marka la barbardhigo 2011), halka saamiga dhoofinta ay kor u kacday, waxayna tiradu ahayd 56.6% (36,000 tan).
Noocyo geedo tufaax ah ee Ural
https://lezgka.ru so.lezgka.ru © Ukraine 2019